Burma Strange News (Burmese Version): မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံး မဖြစ်မနေ စစ်မှုထမ်းကြရတော့မည်
ပေါသွပ် January 9, 2011 at 12:24 PM
ဒုက္ခ.. ဟာသ ကိုမခံစားတတ်တဲ့ ဒီလိုလူတွေတကယ်ရှိနေပါလား.
myanmar@37.com January 9, 2011 at 2:05 PM
ဟားဟားဟားဟား....မြန်မာတွေမှာအသားလွတ်ရမ်းကြောက်နေတဲ့သူတွေတကယ်ရှိတာ ...အပေါ်က Anonymous comment ကပြနေပါတယ်....
bluefire January 9, 2011 at 4:02 PM
အဲ... အိုးမဲသုတ်ပြီးခွပ်ခိုင်းဖို့ ကြံစည်နေပြီထင်တယ်...
Matt January 9, 2011 at 4:42 PM
we all can go in and screw the army from the inside !
imagine 5000 citizens(as soliders) officially holding guns and startingariot!
it's too good to be true ! xD
i'll be the gunsmith xD
သတင်းကို သတင်းလိုပဲရေးစေချင်တယ်။ရှူးသလိုလို ကြောင်သလိုလိုနဲ့ပေါက်တတ်ကရ အဆင့်တန်းမရှိရေးတာတွေ ရပ်သင့်တယ်။
မူရင်း Resource အတိုင်းပဲရေးပါ။
Fri, 07 Jan 2011 19:28:00 +0900(JST)
Anonymous January 10, 2011 at 12:54 AM
ကျော်စွာ January 10, 2011 at 1:02 AM
ဘာလဲ သေနတ်မကိုင်ခိုင်းပဲ ဝါးရင်းတုတ်ပဲ ပေးကိုင်မယ်ထင်တယ် ဟီဟီ
ဒီဆိုက်ဟာ သတင်းဆိုက်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ်ဗျာ။ :P
အတ်ဒမင်တို့၊ သတင်းဆိုက် အဖြစ်မပြောင်းပြစ်လိုက်ကြပါနဲ့နော်။